A History of Disruptive Technologies in Ahịa | Martech Zone
Dika ndi okwu nkwurita okwu siri ike, ha weputara teknụzụ ohuru, ha dara otutu ulo oru ma mebie ndi ozo iji dochie ha. Ihe omuma a, meputara na mmekorita nke di n'etiti Eloqua na Jess3, na-agagharị na akụkọ ihe mere eme na ọtụtụ ihe mere kpatara mgbanwe maka ndị na-ere ahịa.
A History of Disruptive Innovations in B2B Marketing na-eleba anya na teknụzụ na usoro na-agbanwe agbanwe ruo mgbe ebighi ebi otu akụkụ nke ụwa: ndụ nke ndị ọkachamara na-ere ahịa B2B.
Nyochaa nke akụkọ ntolite mara mma na ụlọ ọrụ anyị… ọkachasị ebe ọ bụ na mgbanwe mgbanwe na-egosi na ọ na-aba ụba kama ịbelata. Lelee ihe omuma ndi ozo ndi ozo ebe anyi nyocha akuko: Akụkọ banyere nchịkọta weebụ, Akụkọ Mgbasa Ozi, Akụkọ banyere Email, History of Text Ozi, Na Akụkọ banyere ekwentị.
Tags: akụkọ ihe mere emeakụkọ banyere ahịaakụkọ banyere teknụzụinfographicọhụrụteknụzụ ahịa
Jenụwarị 17, 2012 na 12:27 PM
Nke a bụ ezigbo ngwụrọ “infographic”. Ọ bụ sonso tebụl, na ọ na-akasị bi na ihe na-adịghị remotely metụtara aha “History of Disruptive Innovations in B2B Marketing”. Newbụ ọhụụ anaghị eme ihe “ọgbaghara”. Enweghikwa oriọna ma ọ bụ nghọta ọ bụla n'ime ihe na-eme ka ihe ọhụrụ ahụ mechie ahịa b2b.
Dịka ọmụmaatụ, IBM PC, na - akpaghasị. Mana nke a na-akpali site na mkpa maka ike nghazi nke nwere ike iru ndị mmadụ aka ma jiri mpempe akwụkwọ, nke na mmalite 80s bụ ihe ndekọ, ọ bụghị ahịa. Ọ na-akpaghasị n'ihi na ọ dị mma, ọnụ ala, nwee ike ịnweta (kesaa), ọ bụrụ na ọ dị obere na usoro karịa (ya bụ obere) ihe mechara. Ọ dabere na ụlọ mmeghe na-emeghe. Okwu nhazi na ngwanrọ ngwanrọ na PC apụtaghị ihe ọ pụtara ruo mgbe oge gachara, site na mgbe ọgbaghara ahụ emeworị, ma a na-arụ ụka na ọ nweghị nke ọ bụla n'ime ha bụ "mmeghasị azụmaahịa", na n'ezie ọ bụghị "ahịa ahịa b2b".
Nke a na-emetụ m aka nke ukwuu na mkpuchi - na-anwa ịchebe okwu nke na-aghọ nke ewu, wee na-ezo aka na ya dị mkpa na enweghị nleghara anya maka ihe ọ pụtara. Echere m na nke a iji nye ụfọdụ nghọta banyere teknụzụ dị iche iche agbanweela ma ọ bụ gbasawanye ahịa, na-ebelata ọnụ ahịa ya ma na-abawanye arụmọrụ ya, yana ihe kpatara mgbanwe ahụ ji bụrụ nsogbu (yabụ enweghị ike ịgbanwe agbanwe). Ihe niile ị mere ebe a bụ inye usoro usoro iheomume maka ụfọdụ nnukwu nnukwu ọhụụ na-enweghị ihe gbara ya gburugburu, yana ụgbọ maka Eloqua iji kpọsaa onwe ya ma kwuo na ọ bụ ọgba aghara (nke ọ bụghị).